एन्ड्रोइड फोन फ्री लागि एसएमएस ट्रैकर
एक व्यक्ति पदहरू मा गुप्तचरी चाखलाग्दो तर कठिन हुन सक्छ. यो संभवतः जोखिम मा एक साझेदारी राख्न सक्छन् तापनि, तिनीहरूले ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् कि एक व्यक्ति जीवन शैली मा एक नजर प्रदान. के तपाईं आफ्नो जीवन मा कसैले अविश्वास कारण छ भने छैन वरिपरि जब तपाईँले उनि के गर्दै छन् अझ बढी पत्ता लगाउन लागि आफ्नो पाठ सन्देशहरू मा गुप्तचरी एक तरिका हुन सक्छ.
exactspy यो अब बजार मा अधिक राम्रो तरिकाले-मन पर्थ्यो स्पाइवेयर trackers को एक हो किनभने. यो जरूरी यो डलर लायक छ भन्ने होइन तापनि चिरपरिचित छ बस देखि. धेरै मानिसहरूले लगानी र त्यसपछि भविष्यमा दुःखी.
लक्ष्य फोन बिना फ्री एसएमएस tracker
– फिर्ता सीएसवी माथि / HTML / PDF जासूस कुराकानी पाठ
एन्ड्रोइड फोन फ्री लागि एसएमएस ट्रैकर र exactspy धेरै विशेषताहरु छ:
– ग्लोबल स्थिति प्रणाली हाजिर नजर. लगाएँ र सेल फोन को गतिविधि निगरानी! अपडेट जीपीएस नेभिगेसन ट्रयाकिङ, मार्ग त्याग्न परेशानी-मुक्त चार्ट संग
– रेकर्डिङ स्पर्श मा प्राप्त. यो लक्ष्य टेलिफोन बनाउनुभयो ध्यान च्याट तिर्न गर्न सम्भव हुनेछ।(गुगल एन्ड्रोइड र आइओएस सेल फोन)
– आगमन सेल फोन सीमा. आगमन टेलिफोन कलहरू लागि कुनै पनि संख्या घटाउने.
– एसएमएस मार्फत जानुहोस्. प्राप्त सबै SMS सन्देशहरू मा एक नजर राख वा एक सेल फोन देखि आउँदै दिन. exactspy संग पदहरू मा जासूस
– Keylogger. exactspy keylogging विशेषता तपाईं आफ्नो लक्ष्य ग्राहक मोबाइल उपकरणमा नल हरेक सानो कुरा मार्फत पढ्न गरौं हुनेछ.
– Cpanel. कुनै पनि समय कुनै पनि ल्याप्टप या कम्प्युटर देखि इन्टरनेटमा सबै लग र फोन जानकारी को सुविधा
– भरोसेमंद. 10-दिन पैसा फिर्ता गारंटी
– तालिका ट्रयाक राख्नुहोस्. सबै क्यालेन्डर गतिविधिहरु मा एक नजर राख, तयार सभा र ज्ञापनपत्र.
– इमेल सन्देश मार्फत पढ्नुहोस्. बहिर्गमन र आगमन इमेल सन्देशहरू घडियाँ
– वेब उपयोग जाँच: खोज इतिहास, वेब साइट पुस्तकचिनो, इन्टरनेट साइटहरू अक्षम
– Intercept तत्काल जानकारी: Skype जासूस, WhatsApp जासूस र प्लान जासूस, Viber जासूस र iMessage जासूस
– Bugging. तपाईं exactspy संग इतिहास वातावरणमा सक्षम हुनेछ
– रिमोट नियन्त्रण. तपाईं माउन्ट संग एक टेलिफोन मार्फत हाते टाढाको नियन्त्रण पाउनुहुनेछ exactspy: ग्याजेट बना्छ रूपमा कार्य यिनी प्रकार, टाढा ग्याजेट बन्द बाधा संभावना आफ्नो व्यवस्थापन अन्तर्गत हुनेछ
– Undetectable! माइनर ब्याट्री खपत
– चुपके! उद्देश्य फोन मा प्रदर्शन सक्छ भन्ने पाठ सन्देश आदेशहरू प्रयोग हुँदैन, आफ्नै पालन ट्रयाक को गोपनीयता ग्यारेन्टी
– व्यावहारिक! प्रमुख सेलुलर फोन ब्रान्ड नाम र ओएस समर्थन: एन्ड्रोइड मोबाइल फोन, iPhone मोबाइल फोन
तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ: Would You Like SMS Tracker For Android Phones Free ?
Free sms tracker app for android, Free sms tracker for any phone, Free sms tracker without installing on target phone, लक्ष्य फोन बिना फ्री एसएमएस tracker, एन्ड्रोइड फोन फ्री लागि एसएमएस ट्रैकर
← exactspy – पाठ संदेश iPhone निःशुल्क मा जासुस अनुप्रयोगहरू ?